Xaaf "Xalka Galmudug wuxuu ku jiraa in Kheyre uu isaga tago Dhuusamareeb" - Jowhar Somali news Leader
Home News Xaaf “Xalka Galmudug wuxuu ku jiraa in Kheyre uu isaga tago Dhuusamareeb”
Xaaf “Xalka Galmudug wuxuu ku jiraa in Kheyre uu isaga tago Dhuusamareeb”
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka inay ku fashilantay dhismaha Maamulka Galmudug oo muddo lix bilood ku qaadatay, isagoo ka dhawaajiyay inuu la soo noqday Mas’uuliyaddiisa arrimaha Galmudug oo uu horay ugu wareejiyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Madaxweyne Xaaf oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ayaa wareysi uu siiyay Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xalka Galmudug uu ku jiro in Ra’iisul Wasaare Kheyre isaga soo tago Dhuusamareeb.
Waxaa uu sheegay inuu socdo qorshe la doonayo in maanta lagu shaaciyo xubnaha 89-ka Xildhibaan ee Baarlamaanka Galmudug, isla markaana si qasab ah looga saxiixayo Odayaasha dhaqanka Galmudug.
“Maanta waxay mareysaa in odayaashii saxiixayaasha ahaa in awooddii laga qaaday oo kuwo kale la keeno, caawa iyo berrina waxaa la rabaa in odayaashaas laga saxiixo 69-ka xildhibaan ee ka dhiman baarlamaanka Galmudug, markii laga reebo 20-ka Ahlusuna oo iyaga lasoo magacaabay” ayuu yiri Xaaf.
Xaaf ayaa waxaa uu sheegay in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu la wareegay dhammaan awooddihii Galmudug, isla markaana uu isku noqday Guddigii xalinta khilaafaadka, Guddiga doorashooyinka sida uu yiri.
“Waa nasiib darro in Ra’iisul Wasarihii dalka oo laga rebay cadaaladda iyo u dhaxeynta dadka, inuu isagii inta Dhuusamareeb fariisto uu isku noqdo Guddigii khilaafaadka, guddigii doorashooyinka iyo guud ahaanba isku duba ridaha Galmudug, taasina suurta gal ma aha aniga ayaa madaxweyne ka ah meeshaan wax aan dhiso mooyaane wax ka soo baxayana ma jirto” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Xaaf.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in xalka Galmudug uu ku jiro inay ka tagaan Dhuusamareeb Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Wasiirkiisa Arrimaha Gudaha, isagoo ugu baaqay in dowladda Federaalka faraha kala baxdo arrimaha Galmudug.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaalo ugu jirtay dhismaha Maamulka Galmudug, inkastoo ay qaadatay muddo todobo bilood oo caqabado kala duwan ay jireen, marka caqabad la xaliyana ay soo baxayeen kuwo kale, waxaana haatan gabagabo maraya howsha dhismaha Maamulka Galmudug.